ကိုယ့်ဘာသာကို ဝက်ထီးကန်မှာ ဆက်ပြီး ခံ, စံ
ငါသိတယ်..လူတွေက ခွက်ကြီးလန်အောင် ဝိုင်းရယ်ကြဦးမှာ
ဖြစ်, ပျက် ခြင်းပဲရှိတယ်… အဲဒီတော့ ထပ်သရီး ဆိုပြီး ထပ်ပြီး မမဲ့နဲ့
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:12 PM2comments: Links to this post
နင့်စကားလုံးတွေက ဘက်ခမ်းကစ် ကစ်သွားသေးတယ်
မှတ်တမ်းအဖြစ်နဲ့ ငါ့နှလုံးသားရဲ့ စက်ခန်းအသစ်ထဲမှာ
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:31 AM 1 comment: Links to this post
သူ့အတွက် မှန်တိုင်းက ပြဒါးပြယ်နေသတဲ့
ညတိုင်းမက်ရတဲ့ တစ်ထောင့်တစ်ည အိပ်မက်
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 11:55 PM No comments: Links to this post
ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့အတူ ရထားတစ်စီးတည်းစီးရင်း
ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့အတူ ငှက်ပစ်ထွက်ရင်း
ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့အတူ ဖိုမဆက်ဆံရင်း
ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့အတူ ရေငုပ်ရင်း
ကဗျာတစ်ပုဒ် နဲ့အတူ နေပူဆာလှုံရင်း
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:09 PM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 11:34 PM 1 comment: Links to this post
မှန်မကြည့်ဖြစ်တာဘယ်လောက်ကြာပြီမသိ။ ရုတ်တရက် မှန်ထဲကိုသေချာကြည့်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်ဟာ ကျွန်တော်မဟုတ်သလို ခံစားလိုက်ရ။ ကျွန်တော့်ပုံစံနဲ့ ချွတ်စွပ်မတူသူတစ်ယောက်က စိမ်းစိမ်းစိုက်ကြည့်နေသလိုမျိုး။ သေချာပြန်ကြည့်လိုက်တော့လည်း ကျွန်တော်မှ ကျွန်တော်အစစ်။ ဝှုး…လေပူတစ်ချက်မှုတ်ထုတ်လိုက်တော့ မှန်ထဲက ကိုယ်တော်ကလည်း ကျွန်တော်လုပ်သလို လိုက်လုပ်ပြန်တယ်။ အင်းဘာမှားနေသလဲ။ ကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ် ကို သေချာပြန်ကြည့်မိတော့မှ အရင်က ကျွန်တော်ထက် ဗိုက်ကပူနေတယ်(ဘီယာချတာများလို့)။ မျက်လုံးထောင့်မှာလည်း အရေးကြောင်းတစ်ချို့က ပီပြင်ထင်ရှားလာ။ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားခြင်းသိပ်မရှိတော့ အဆီပိုတွေက နေရာတစ်ချို့မှာ ပြန့်ကျဲ။ နှုတ်ခမ်းမွေးက ကျိုးတို့ကျဲတဲ။ မုတ်ဆိတ်မွှေးနှစ်ပင်တောင်ရှည်နေပြီ။ ရိတ်ဦးမှ။ အအိပ်ပျက်တော့ ဝက်ခြံကတစ်လုံးစ နှစ်လုံးစ။ ဆံပင်တွေကလည်း ဂုတ်ထောက်။ ဒါပေမယ့် ထိပ်က ဆံပင်တွေပါးချင်နေပြီ။ နဖူးကြောတစ်ချို့သိသိသာသာ ရှုံ့တွလာ။ အရင်ကနဲ့တူတာဆိုလို့ ဒူးခေါင်းက အမာရွတ် ချုပ်ရိုးရှည်နဲ့ မျက်လုံးစစ်စစ်နှစ်လုံးကိုပဲရှာဖွေ့တွေ့လိုက်ရ။ တော်သေးတယ်။ ခုမှသက်ပြင်းချလိုက်မိ။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:19 AM 1 comment: Links to this post
“ဗြန်း” ကနဲ ရိုက်ချလိုက်ကာမှ
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 8:45 AM No comments: Links to this post
ဟိုး…ရှေးရှေးမနီးမဝေးလောက်တုန်းက ရွာတစ်ရွာလုံးက လူဆိုးတွေပဲနေကြသတဲ့။ သူတို့ကလူဆိုးဆိုတော့ ရိုင်းစိုင်းတယ်၊ ရက်စက်တတ်တယ်။ဲဒါပေမယ့် ကောက်ကျစ်တဲ့အလုပ်ကိုတော့ သူတို့ကိုယ်တိုင် ရွံရှာသတဲ့။ အဲဒီရွာကိုအများက……….အဲလိုသမုတ်ကြတယ်.။
မြေခွေး။ ။ ဘယ်သူလဲဟေ့…(အိမ်ထဲမှနေ၍)
ဧည့်သည်။ ။ ကျွန်တော် ဝက်သုံးကောင်ပုံပြင်ထဲက အငယ်ဆုံးဝက်ကလေးပါဗျာ…
မြေခွေး။ ။ ဟာ..မင်းဘာလာလုပ်ပြန်တာလဲ..မင်းနောက်ကိုငါ မလိုက်ဖြစ်တာကြာပြီ..မင်းအသားကိုလည်း ငါစားချင်စိတ်မရှိတော့ဘူး…စားရတာနည်းနည်ဲး..ငါ့ကိုလူမုန်းတာကများများ…သွား..သွား..
ဝက်ငယ်။ ။ ဟာဗျာ..ခင်ဗျားက ကျွန်တော့်ကို ကောက်ကျစ်ပြီးဖျားယောင်း..ပြီးတော့ မှ သတ်စား ဒါမှ ပုံပြင်ထဲက အတိုင်းဖြစ်မှာလေဗျာ..လုပ်ပါ..ကျုပ်ကို လူတွေသနားလာအောင်လို့..
မြေခွေး။ ။ ဒီကောင်ကတော့..ငါ့ဟာငါ သတ်သတ်လွတ်သာစားမယ်ဟေ့..မင်းလိုကောင်မျိုး လက်ဖျားနဲ့တောင်မတို့ဘူး…ကြွမှာသာ မြန်မြန်ကြွ
ဝက်ငယ်။ ။ လုပ်ပါဗျာ…ရေလေးတစ်ခွက်လောက်တော့ တိုက်ပါ..အထဲဝင်ပါရစေ…
မြေခွေး။ ။ ဟာ..ပြောလေဆိုးလေ..မန်းလေပြဲလေ ကောင်ပါလား..ငါ ဖုန်းဆက်ပြီး ဦးဇီးကွက်ကိုခေါ်လိုက်ရမလား..
ဝက်ငယ်။ ။ခင်ဗျားက မြေခွေးငကြောက်ကြီးပဲ… ပြောပြောဆိုဆို ဝက်က ခြံတံခါးကို ဆောင့်ကန်ကာ ထွက်သွားလေသည်။
မြေခွေး။ ။ မင်းကြောက်တယ်လို့ထင်ခံရတာ အရေးမကြီးဘူး…အလကားနေရင်းငါ့မှာ ရာဇဝင်ထဲမှာ လူမုန်းများရတယ်…မင်းလိုဝက်မျိုး ဖျားယောင်းစရာတောင်မလိုဘူး..မြေခွေး သိက္ခာကျတယ်… လမ်းမှာတွေ့ ဘယ်သူမှမသိခင် ကွိခနဲ နေအောင်စားလိုက်လို့ရတယ်..ကွ…
ဦးအံ့ကျော်။ ။ ဘယ်သူလဲဟေ့…
ဧည့်သည်။ ။ ကျွန်တော် ရှုတင်မန်နေဂျာပါဗျာ…အစ်ကိုကြီးအလုပ်မဆင်းလို့ လိုက်လာခေါ်တာပါ…
ဦးအံ့ကျော်။ ။ သြော်…လာလာ…ဝင်ကွာ ထိုင်..ဘာသောက်ဦးမလဲ…
မန်နေဂျာ။ ။ မသောက်တော့ပါဘူးဗျာ..အစ်ကို ကို့ ဒါရိုက်တာက အခေါ်တော်လွှတ်လိုက်လို့..နောက်တစ်ကားအတွက်…
ဦးအံ့ကျော်။ ။ သြော်…ဘယ်လိုဇာတ်မျိုးလဲကွ…ထုံးစံအတိုင်းပဲလား…
မန်နေဂျာ။ ။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ အစ်ကိုကြီးရာ..အစ်ကိုကြီး အက်ရှင်အတိုင်း အပီအပြင် သရုပ်ဆောင်ရမယ့်အခန်းတွေကြီးပဲ…ကြမ်းရမယ်..ရမ်းရမယ်…မိုက်ရမယ်..ဖိုက်ရမယ်…
ဦးအံ့ကျော်။ ။ အော်..အင်း..ဒါဆိုလည်း ငါမလိုက်နိုင်တော့ဘူးလို့ မင်းတို့ဆရာသမားကို ပြောလိုက်ပါကွာ။ အသက်အရွယ်ရလာတော့ ပုတီးစိပ် တရားထိုင် ငါလည်းကုသိုလ်ဘာဝနာပွားများချင်လို့…ဒီနေ့တောင် ဥပုသ်စောင့်နေတာကွ…
မန်နေဂျာ။ ။ ခင်ဗျာ..ဒါဆို တစ်ခြား အစားထိုးဖို့ လူကြမ်းတွေရော…သူတို့မှမရှိရင်တော့ ဘယ်သူမှ အဲဒီနေရာမှာ သရုပ်ဆောင်ရဲမှာ မဟုတ်ဘူးဗျ….
ဦးအံ့ကျော်။ ။ အော်..သူတို့လဲ..ချွေးနှဲစာလေးတွေစုပြီး ဒီနေ့ပဲ ရွာဦးဘုန်းကြီးကျောင်းမှာ ဘုံကထိန်လုပ်တယ်…ဒါနလေးမြောက်သွားအောင် မင်းလဲ သွားစားလိုက်ပါဦး…
မန်နေဂျာ။ ။ (ခေါင်းကလေးကုတ်၍) …အော်..ဟုတ်ကဲ့..ကျွန်တော် မသွားတော့ပါဘူး..လက်ဖက်ခြောက်ယူပြီးပဲ ပြန်တော့မယ်..ဒါမှ ဒါရိုက်တာကြီးဆူရင် တန်းခပ်လို့ရအောင်....ပြောပြောဆိုဆို မန်နေဂျာတစ်ယောက် ဒီနေ့အလုပ်မဖြစ်ပေဘူးဆိုသည့် မျက်နှာငယ်လေးနဲ့ ပြန်သွားပါသည်။
အိမ်ရှင်။ ။ ဘယ်သူလဲဟေ့…ဘေးကပတ်ပြီး အိမ်နောက်ဖေးကိုလာခဲ့…
ဧည့်သည်။ ။ ဟား…ကိုရွှေယုန်က ဘာတွေလုပ်နေတာတုန်းဗျ…ပြောပြောဆိုဆို အိပဲ့အိပဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာနှင့် ဖိုးရွှေလိပ်က အိမ်နောက်ဖေးဘက်ရောက်သွာသည်။
ရွှေယုန်။ ။ ရွှေယုန် ဘာမှမလုပ်ပါဘူးကွာ…ရွာပတ် အပြေးလေ့ကျင့်ပြီး အိမ်နားမှာ သွေးပူလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတာ…
ရွှေလိပ်။ ။ အတော်ပဲဗျာ..ကျွန်တော်လည်း အဲဒီကိစ္စလာတာ…ခင်ဗျားနဲ့ကျွန်တော့် အပြေးပြိုင်ပွဲ နောက်အပတ်မှာ ထပ်နွှဲလိုက်ရအောင်….
ရွှေယုန်။ ။ တော်ပါပြီကွာ…မင်းက လိပ်သူတော်လုပ်၊ ငါ့ကို နိုင်ချင်ယောင်ဆောင်၊ ငါက ဟန်ဆောင်အရှုံးပေး… အဲဒါအလုပ်ကောင်းတာ အခု ငါ့အမျိုးတွေက ငါ့ကို သတ်ချင်နေကြပြီ…
ငါတို့ ယုန်မျိုးမှာ လိပ်ကိုရှုံးတဲ့ကောင် မရှိဘူးတဲ့…ဒီကြားထဲလူတွေကပါ ငါတို့အမျိုးကို ငပျင်းတွေလို့ထင်ကုန်ကြပြီ။ အဲဒါ..မင်းလုပ်တာ…
ရွှေလိပ်။ ။ အေးပါကွာ…ဒီတစ်ခါ ငါကြိုက်တဲ့လိပ်မလေးက မင်းကို ငါနိုင်အောင်ပြေးနိုင်ပြီဆိုရင် လက်ထပ်မယ်တဲ့…ကူညီပါသူငယ်ချင်းရာ..ပထမတစ်ခါတည်းက ရည်းစားဖြစ်သွားပြီပဲဟာ…လုပ်ပါ…
ရွှေယုန်။ ။ တော်ပြီသူငယ်ချင်းရေ…နော်..မင်းကို အကူကောင်းတာ ငါအမွေဖြတ်ခံရတော့မယ်…မဖြစ်ဘူး…
ရွှေလိပ်။ ။လုပ်ပါကွာ..မင်းကလည်း ငယ်ငယ်တည်းက ပေါင်းလာတာ ဘော်ဒါအကန့်ကိုမရှိဘူး… မင်းအတွက် မုန်လာဥနီ ဝမ်းတေဘယ်လ်နဲ့ ကြိုက်တာချကွာ..ငါပြုစုမယ်…ဒီတစ်ခါ ပြိုင်ရင် သိက္ခာရှိအောင် မင်းခြေချော်လဲလို့ ခြေထောက်ခေါက်ပြီး ငါ့ကို ရှုံးသွားဟန်ဆောင်မယ်..ကဲဘယ်လိုလဲ
ရွှေယုန်။ ။ (တချက်စဉ်းစားပြီးမှ…) အေးလေ အဲဒါဆိုလည်းကြည့်ကျက်လုပ်ကြတာပေါ့…ဒီတစ်ခေါက် ငါ့သိက္ခာမကျရင်ပြီးတာပဲ…ကလေးတွေက အစ ငါ့ကိုတွေ့ရင် မခန့်လေးစားနဲ့..အပြေးချန်ပီယံအမျိုးကွ…
ရွှေလိပ်။ ။ အဲလိုလုပ်ပါကွ…..ကဲကဲ..နောက်တစ်ပတ်တွေ့မယ်…
သူ့အခွံကြီးကို မနိုင်တနိုင်မ၍ အိပဲ့အိပဲ့နှင့်ပြန်သွားလေသည်။ ရွှေယုန်ကတော့ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရင်း ကျန်ရစ်သည်။
ကုဠေရှစ်ဆယ်သူဠေးသား။ ။ ဘယ်သူလဲကွ….
ဆားတောင်(တုံ)ဆရာတော်။ ။ငါကွ.မင်းအကြောင်းရေးတဲ့သူ…မင်းငါ့ ဖတ်စာအုပ်ထဲက ပျောက်သွားလို့…
သူဠေးသား။ ။ သြော်…အရှင်ဘုရား…တင့်ပါ့ဘုရား တပည့်တော် လူဆိုးလူမိုက်ဘဝနဲ့ ဆက်ပြီးမနေနိုင်တော့လို့ပါ…
ဆားတောင်ဆရာတော်။ ။ ဟ…ဘယ်ဖြစ်မလဲဟ..မင်းလိုလူမျိုးတွေကိုပြပြီးမှ ငါက နောက်လူတွေကိုပညာပေးရမှာလေ။ မင်း ငါ့စာအုပ်ထဲကထွက်ပြေးလို့ဘယ်ရမလဲ။
သူဠေးသား။ ။ ပျက်အစဉ်ပြင်ခဏပါဘုရား…. တပည့်တော်လည်းအမြင်မှန်ရပြီး ကောင်းရောင်းကောင်းဝယ်လုပ်စားနေပါတယ်။ အဲဒီစာအုပ်ထဲမှာနေပြီး လူတကာ လက်ညှိုးငေါက်ငေါက်ထိုးပြီး တံတွေးပင်လယ်ထဲပက်လက်မမြောချင်တော့လို့ပါ။
ဆားတောင်ဆရာတော်။ ။ အိမ်း…အိမ်း..ဒီလိုဆိုတော့လည်း မင်းကိုယ်တိုင်တောင် အမြင်မှန်ရပြီပဲ။ ငါလည်းရေးရကျိုးနပ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်လူတွေအတွက် ဆုံးမဖို့ရာ သူဠေးသားတစ်ယောက်လိုက်ရှာရတော့တာပေါ့ကွာ….
အဲလိုနဲ့ ရွာထဲမှာ နေ့စဉ်နေထိုင်သွားကြ။ သူတို့ရဲ့မျိုးဆက်တွေက သူတို့အလုပ်တွေကိုဆက်လုပ်ကြနဲ့ စည်စည်ကားကားပါပဲ။ သေချာတာကတော့ အဲဒီဗီလိန်ရွာဟာ ကျွန်တော်တို့ တွေရဲ့စိတ်ထဲမှာရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 8:12 AM2comments: Links to this post
၂ အချိုး ၁
တစ်ချို့လဲ မုန်းနေရာက ချစ်သွားသလို
လူသားတွေကို ဝါးမြို နေ..ခဲ့…ဆဲ
ခင်ဗျား မြင်မြင်ချင်းချစ် ရိုမန်တစ်လား
Unconditional Love နဲ့
ချစ်သူလက်ကို ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ဆုပ်ကိုင်ရင်း
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 12:17 PM2comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:23 AM No comments: Links to this post
ဟိုးရှေးရှေးတုန်းက ကျွန်တော်ပေးခဲ့ဖူးသော လက်ဆောင်တစ်ခု...အမှတ်တရ ဘလောခ့်မှာ သိမ်းထားချင်လို့ပါ...ဗွေမယူလောက်ပါဘူးနော်..
လူယောင်ဆောင်ထားတဲ့ ဂဠုန်ကြီးက ပြုံးဖြီးဖြီးနဲ့ ပြောတယ်။ အဲဒီအချိန်ကြမှ ကျွန်တော့်ကိုလာကြိုတဲ့သူငယ်ချင်းဇာနည်က နောက်ကြခြင်းနဲ့ ရောက်လာပါတော့တယ်။ ထုံးစံအတိုင်း အလာပသလာပ ပြောပြီးကျွန်တော်တို့လမ်းခွဲခဲ့ပါတယ်။
သူမတို့ ကားလေးမီးခိုတန်းသွားတဲ့အထိ ကျွန်တော်ချောင်းကြည့်မိတယ်။ အဲဒီနောက်တော့ လေပြင်းနဲ့အတူ ကျွန်တော့်အဆုတ်ထဲကလည်း လေတွေရော အနီရောင်တွေရော တလဟောပြိုကျလာပါတော့တယ်။ သူမပေးခဲ့တဲ့ လက်ကိုင်ပဝါလေး ချင်းချင်းနီတဲ့အထိပေါ့။ ကျွန်တော်သိတယ် နောက်ဆုံးပြင်ဆင်ခြင်းအဖြစ် ဇာနည်ရယ် နောက်ပြီးရင်ခွဲရုံရယ်ကို ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်လိုက်တယ်။ ဖုန်း စကားပြောခွက်ကို ချချလိုက်ခြင်း ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်အထဲက ရှိသမျှအရာတွေ ဆန်တက် ထွက်ကြလာလောက်အောင် ပြင်းပြင်းထန်ထန်ချောင်းတစ်ချက်ဆိုးလိုက်တယ်။ ထွေးခံတင်မက၊ ကျွန်တော့် အိပ်ယာခင်းအဖြူလည်း ချင်းချင်းနီသွားတာပါပဲ။ အဲဒီလိုနဲ့ ခဏ ငြိမ်သက်ပြီး ဝင်သက်ထွက်သက် မှတ်နေတုန်း ကင်းဗတ်စ် အဖြူတစ်ချပ်ကို ပိတ်စအမည်းရောင်နဲ့ ဖုံးအုပ်လိုက်သလို ကျွန်တော့်ကမ္ဘာအမှောင်အတိကျသွား။ ကျွန်တော်တစ်ယောက် လေနှင့်အတူ လွင့်မျောသွားပါတော့တယ်။
တစ်ခြားသိတာဆိုလို့ ဇာနည်ရယ်။ ရင်ခွဲရုံက ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းရယ်ပါပဲ။
အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရရင်တော့ ဒီခရီးဒီလမ်းကို အချိန်မတော်တစ်ကိုယ်တည်းလာဖို့ ဇာနည့် တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် စိတ်ကူးမိမှာမဟုတ်။ ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းတွေကြားမှာ ဇာနည်ကမကြောက်တတ်ဆုံး။ ဒါတောင်ဘာမှန်းမသိ ဒီတစ်ခါ တော့ဇာနည်ရွံ့ နေတာကို ကျွန်တော်တွေ့နေရတယ်။
ကျွန်တော့်ဘေးမှာ ဇာနည်တစ်ယောက်တည်း ရင်ခွဲရုံကအပြန် ကားမောင်းရင်းပြောနေတယ်။ ကျွန်တော့်ကိုရည်ရွယ်ပြီးပေါ့။
ဒါမှလည်းသူစိတ်သက်သာရာရမှာပေါ့ ပြောပါစေ။ အခုအချိန်မှာ ကျွန်တော့်ခန္ဓာကိုယ်ကို ဇာနည်ကလည်းမမြင်တော့။ ဘယ်သူကမှမမြင်တော့။
ကျွန်တော်အချစ်ဆုံး ဆိုသည့်အရာသည်လည်း အခုအချိန်မှာ ထိတွေ့ခွင့်တောင်မရှိတော့။ ဘာဆိုဘာမှမရှိတော့သောဘဝမှာ ကျွန်တော့်အတွက်မနက်ဖြန်ဆိုတာက နထ္တိ။ တစ်ယောက်တည်းတွေးရင်း စိတ်ညစ်ညစ်နှင့် လေတစ်ချက်ချွန်လိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်လေချွန်တာကို ဇာနည်ကြားသွားပြီး
“ငဒီ မင်းပါလာလား။ အေးကွာ ငါနဲ့စကားလေးဘာလေးပြောပါဦး… ငါတစ်ကောင်တည်းကားမောင်းပျင်းတာ မင်းလည်း သိသားနဲ့။”
ကျွန်တော်လည်းသိပါသည်။ ကျွန်တော်သူနှင့် အခုအချိန်မှာ စကားပြောလို့မရမှန်း။ ဒါတောင်သူ့ဝသီအတိုင်း နောက်လိုက်ပြောင်လိုက် လုပ်နေတုန်း။ ကျွန်တော်လည်းသူ့ကို စချင်နောက်ချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်။
ကျွန်တော် ကားကက်ဆက်ခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်တယ်။ ဘယ်လိုမှနှိပ်လို့မရ။ ထ်ိလို့မရ။ အာရုံတွေကိုစုစည်း ကျွန်တော်ထပ်နှိ်ပ်တယ်။ ဘယ်လိုမှမဖြစ်။ စိတ်တွေကစုစည်းလို့မရ။ ကျွန်တော်လက်လျှော့ချင်လာတယ်။ ဒါပေမယ့်နောက်ဆုံးအကြိမ် ကျွန်တော်ရှိသမျှအာရုံကိုစုစည်း စိတ်ကိုတတ်နိုင်သလောက်အငြိမ်ဆုံးထား ကက်ဆက်ခလုတ်တစ်ခုတည်း ကိုသာဆောင့်နှိပ်ချလိုက်တယ်။
“အုန်း….”စပီကာအသံ မတိုးရသေးသည့်အတွက် သီချင်းသံကအကျယ်ကြီး ထမြည်လေရော။
ဟဲ့ သောက်ခွေး… ဇာနည်လန့်သွားတယ်။ သူလန့်တာကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်အားရပါးရ ရယ်မိတယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်တွေဖြစ်ပြီးနောက် ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရယ်မောခြင်း။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရယ်သံက ရေတွင်းပျက်ထဲက အသံတစ်ခုလို တိုးဝင်နွမ်းလျသွား...
သူ့ကို ထိတ်လန့်အောင်လုပ်မိသည့်အတွက် ဇာနည်ကျွန်တော့်ကိုဆဲတယ်။ သူဆဲသည့်အသံမှာ အခုအချိန်မှာ အသာယာဆုံးအသံဟုကျွန်တော်ထင်မိသည်။ ဘာပဲပြောပြော ဇာနည့်ကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်သည်။ တော်ရုံလူသွေးပျက်မည့် အလုပ်ကိုစိတ်စေတနာနှင့် ကျွန်တော့်အတွက် လုပ်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထို့နောက်ဇာနည့်ထံမှ ဘာအသံမှမကြားရတော့ပေ။ သေချာပါသည်။ ကားစပီကာကလွင့်ပျံ့နေသော “သတိ” ဆိုသည့် ကျွန်တော်အလွန်နှစ်သက်သော သီချင်းသံကြားရင်း ဇာနည်ကျွန်တော့်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပေလိမ့်မည်။
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သီချင်းမှာမျောပါနေတုန်း ဇာနည်ကကားစက်ကိုသတ်လိုက်သည်။ သြော်…ကျွန်တော်သူမကိုလွမ်းရင် လာမျှော်လေ့ရှိသော သူမတို့အိမ်အနောက်ဖက်ကိုတောင်ရောက်နေခဲ့ပြီဲ။
အဖြူရောင်နှစ်ထပ်တိုက်အိမ်လေးကတော့ အမှောင်အောက်မှာသူမဟုတ်သလို ငြိမ်ကုပ်လို့။ ညမီးအနီရောင်မှိန်မှိန်လေးထွန်းထားတဲ့အခန်းထဲက အပေါ်ထပ်ဘယ်ဘက်ထောင့်စွန်းက သူမအခန်းကိုကြည့်မိ။ အရာအားလုံးလှပစွာ သူမနဲ့အတူ အိပ်မောကျနေမှာပါ။ အိမ်နောက်ဖေးမြေကွက်လပ်မှာ သူမကိုယ်တိုင်စိုက်ထားသော ပန်းရနံ့မျိုးစုံက ကျွန်တော့်ရင်ဘတ်ထဲအထိ ရောက်လာလေသည်။ ဇာနည်ကကားပေါ်မှဆင်း၍ ကားနောက်ဖုံးထဲမှ အထုပ်တစ်ခုကိုယူလိုက်လေသည်။ ထိုခဏ၌ ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ရင်အုံ ဟာခနဲဖြစ်သွားလေသည်။ အထုပ်ကိုသတိကြီးစွာထား၍ကိုင်ရင်း ဇာနည်ကခြံကိုကျော်တက်ဖို့အတွက် နေရာရှာနေသည်။
အာဒမ်ကအရာရာကို အံတုပြီး ဘုရားသခင်က သူ့ဘယ်ဘက်နံရိုးနဲ့ သွန်းလုပ်ပေးထားတဲ့ ချစ်သူ ဧဝ အတွက် ပန်းသီးတစ်လုံးဆွတ်ခဲ့တယ်။
ဇာနည်ပြန်သွားပြီ်။ ကျွန်တော်ခြံအနောက်ဘက်က ဒန်းလေးပေါ်မှာထိုင်ရင်း မနက်ခင်းရဲ့သံစဉ်ကို ကြိုးညိုနေမိတယ်။ တစ်ခြားပန်းပင်တွေ ဝိုင်းအုံနေတဲ့အလယ် ဇာနည်ခုနကတူးဆွသွားတဲ့နေရာကို မမှိတ်မသုန်စိုက်ကြည်နေတုန်း ကျွန်တော်အရမ်းပျော်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်အနှစ်နှစ်အလလက ဆုတောင်းတွေပြည့်ပြီပေါ့။
အပင်လေးက ကျွန်တော့်ခါးအလယ်လောက်ရောက်တော့ ဆက်မတက်တော့ဘူး။ ရပ်သွားတယ်။ ကျွန်တော်လည်း မျက်လုံးမှိတ်ပြီး ကျွန်တော့်ဆီမှာရှိသမျှ စိတ်စွမ်းအားတွေ စုစည်းပြီး အပင်လေးထဲ မှာ အာရုံစူးနှစ်ထားလိုက်တယ်။ နောက်ခဏအကြာ ကျွန်တော်အမျိုးအမည်မသိတဲ့ စိတ်ကိုကြည်နူးစေတဲ့ရနံ့လေးတစ်ခုရလိုက်လို့ မျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ ထူးဆန်းတဲ့ပန်းလေးတစ်ပွင့် ခုနကအပင်လေးထိပ်က အရွက်လေးတွေကြားထဲမှာပွင့်လို့။
သူမအရမ်းပျော်ပြီး ကလေးလေးတစ်ယောက်လို ပန်းလေးတွေကြားမှာ ခုန်ပေါက်နေတာပေါ့၊ အဲဒီမြင်ကွင်းကိုကြည့်နေရင်းကျွန်တော်မှာ ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့ ဝမ်းနည်းခြင်းရယ်လွန်ဆွဲနေတယ်။ အရမ်းပျော်ရရင် ငိုရတတ်တယ်တဲ့။ ဒါနဲ့ကျွန်တော်အပျော်တွေကိုပဲ သိမ်းပိုက် အနိုင်နဲ့ပိုင်းပြီး သူမတို့ခြံထဲကနေလှည့်ထွက်လာခဲ့တယ်။
ကျွန်တော့်လက်ဆောင်လေးနဲ့ မင်္ဂလာဆောင်မှာ သူမဒီနေ့အစွမ်းကုန်ကို လှနေမှာပါ။ နောက်ပြီး ခေါင်းလောင်းသံတွေဝေဆာနေတဲ့ ဘုရားကျောင်းထဲက တွေ့သမျှလူတွေကလည်း သူမကိုငေးမောနေမှာပေါ့။ သူမတို့နှစ်ယောက်ဘဝတစ်သက်တာ ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေ။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 8:32 AM2comments: Links to this post
ခံပြင်းတောက် ခေါက်သံတွေ ဆူညံကုန်တယ်
တောသုံးတောင်သတင်းဌာနက ဒီလို လွှင့်လိုက်တယ်
“ဝံပုလွေတစ်ကောင်မှ စားကျက်မြက်ခင်းစိမ်းတွင် ဖြူဖြူစင်စင်သိုးတစ်ကောင်အား ခြောင်းမြောင်းနေစဉ်
ကျန်သိုးအုပ်တစ်အုပ်လုံးမှ ၄င်းဝံပုလွေအား ဝင်ရောက်ခုန်အုပ် ကိုက်ဖြတ်စားသောက်ကြခြင်း” ….
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:45 AM2comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 11:46 AM No comments: Links to this post
နှလုံးသားချင်း နီးနီးချင်နေတဲ့ကောင် (ကြောင်လိုက်ပုံများ)
ရွံမုန်းတယ် (အဲဒါလည်း တစ်ကိုယ်ကောင်းဆန်ခြင်းတစ်မျိုး)
သူ့ကိုယ်သူ သမ္မတလို့ထင်နေတဲ့ကောင် (အား…ပါး…ပါး)
ဒါဖြစ်လို့ ဒါဖြစ်တယ်လို့ မြင်လို့ကိုမရဘူး…
မှတ်ချက်။ ။အဲဒီကောင်ကို တွေ့ရင်ဝေးဝေးကသာရှောင်ဗျာ။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 5:39 AM2comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 4:51 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 9:28 AM2comments: Links to this post
ဒါလည်း ကဗျာဟောင်းတစ်ပုဒ်ပါ..အခုတလော Photoshop နဲ့လက်သရမ်းချင်နေလို့း)
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 6:21 AM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 4:01 AM 1 comment: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:44 AM6comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:31 PM 1 comment: Links to this post
ဘဝမှာ တစ်ခါမှမရှိတဲ့ အားတွေရရှိလာ
ငါ နပိုလီယန်ကိုတောင် စိန်ခေါ်ရဲလာတယ်
ငါ့အတွက် ကံကောင်းခြင်း ဆေးတစ်စက်ရေ..
တင်ဆက်ပုံက မှားခဲ့ရတာပါ မိခရေရယ်
ဘေးအိမ်က ဒေါ်ဒေါသတရုတ်မ လက်ဝါးက
စိတ်ကြည်ရင် ချော့မြူလိုက် သီချင်းဆိုလိုက် နဲ့
လူအုပ်အရမ်းကြီးလာတော့ “ချာကနဲ” လှည့်အထွက်
ကွန်ဖြူးရှပ်လို တရုတ်ကြီးတစ်ယောက်နဲ့ ဝင်တိုက်ခဲ့သေးတယ်..
သတိရလို့ ကြည့်လိုက်တော့ မျက်ရည်တွေကြား
သတိရရခြင်း ကျွန်တော့်ဘယ်ဘက်ပါးကို ဖြောင်း ကနဲ နေအောင်ချလို့
သူမက မျက်နှာကို လက်ဝါးနဲ့အုပ်ရင်း ထွက်ပြေး
ကျွန်တော် စိတ်ချလက်ချ လှဲအိပ်လိုက်တယ်…
ကွန်ဖြူးရှပ်လို တရုတ်ကြီးက ဘေးမှာဝင်လှဲရင်းပြောတယ်
၁လုံး, ၂လုံး, ၃လုံး, ၄လုံး တွေအကြောင်းပါတယ်
The Ants အကြောင်းပါသလို….Greenday အကြောင်းပါတယ်
Harry Potter အကြောင်းပါသလို…..God Father အကြောင်းပါတယ်
Kat Deluna ရဲ့ကကွက်တွေအကြောင်းပါသလို….လေဘာတီမမြရင်လည်းပါတယ်
Prodigy ရဲ့ စည်းချက်တွေပါသလို…. စိန်ဗိုလ်တင့်ရဲ့တီးချက်တွေပါတယ်
လန်ဗိုမောင်းနေတဲ့သူဠေးသားအကြောင်းပါသလို….ငါးကျပ်၊တစ်ဆယ်တောင်းတတ်တဲ့ ချေးညှော်လေးတွေအကြောင်း…ဆိုက်ကားအုံနာခ ဈေးတက်တဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်
မာယာကော့စကီးရဲ့ ဗော့ဒကာအနံ့ပါသလို…အလင်းဆိုင်ထဲက ရနံ့တစ်ချို့အကြောင်းပါတယ်
ဘီယာဆိုင်၊ စင်တင်တေးဂီတတွေပါသလို….ညလုံးပေါက် အလင်းဆိုင်တွေပါတယ်
လျှပ်ပေါ်လော်လီ ပိုက်ဆံနဲ့ အလှအရမ်းမက်တတ်တဲ့ ကောင်မလေးတွေအကြောင်းပါသလို…..ပြည့်တန်ဆာတွေအကြောင်းပါတယ်…
၅၂၈ အကြောင်းပါသလို…. ၁၅၀၀ အကြောင်းပါတယ်…
ကျွန်တော်က တစ်ခြမ်းပဲ့လကို ငေးကြည့်နေမိတယ်…
အဘိုးအိုကို အပြစ်တွေ ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံမလို့ဘေးကိုလှည့်ကြည့်လိုက်တော့
အဲဒါနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဘာလုပ်ရမှန်းမသိပဲ
တစ်နေ့တော့ “အိမ်” ပြန်ရောက်မှာပါလေ….
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:47 PM2comments: Links to this post
Vampires are mythological or folkloric beings who subsist by feeding on the life essence (generally in the form of blood) of living creatures. Although typically described as undead,avampire could bealiving person. (source: Wikipedia)
နှင်းစက်နှင်းပေါက်များကြားမှ နေ၏အလင်းတန်းများ ဖြာထွက်စီးဆင်းနေကြပြီ။ သစ်ပင်များထက်မှ ငှက်ငယ်ကလေးများလည်း တီတီတာတာ ကျီကျီကျာကျာဖြင့် အသံပေးနေကြ၏။ သြကာသလောက ယန္တားရားတစ်ခုစတင်လည်ပတ်ပေတော့မည်။ ထိုကဲ့သို့ မနေ့ကနည်းတူရောက်လာသော အရုဏ်မနက်ခင်းသစ်တိုင်းသည် ကျွန်တော့်တစ်နေ့တာ၏ အိပ်တန်းတက်ချိန်များသာလျှင်ဖြစ်ပေသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်……
ကျွန်တော်လူမှန်းသိတတ်စအချိန်က စ၍ အကောင်ငယ်ကလေးများကို မသတ်ရက်။ သူတစ်ပါးအသက်ကို သတ်ခြင်းသည် အကြီးဆုံးသောပြစ်မှုတစ်ခုဟု ခံယူထားပေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘယ်အကြောင်းနှင့်မျှ သူတစ်ပါးအသက်ကို မသတ်ပါရစေနှင့်ဟု ငယ်၇ွယ်စဉ်ကတည်းက အကြိမ်ကြိမ်ဆုတောင်းခဲ့ဘူးသည်။ သို့သော် ကျွန်တော့်ဆုတောင်း မပြည့်ခဲ့ပါ။ ဗီဇအရ ဘိုးဘေးများစွာ၏ မျိုးရိုးစဉ်ဆက်အမွေဆိုးအရ ကျွန်တော်လူလားမြောက်လာသည်နှင့်အမျှ လောကတွင် ကြောက်စရာအကောင်းဆုံး လူသတ်ကောင် တစ်ယောက်သာဖြစ်လာခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်အသက်ရှင်သန်ရန်အတွက် လူသားများ၏ သွေးစိမ်းရှင်ရှင်များဖြင့် ကျွန်တော့်သွေးပုပ်များ ပုံမှန်လဲလှယ်ရသည့် Vampire တစ်ကောင်ဖြစ်နေသောကြောင့်ပင်…ဟုတ်သည်။ ကျွန်တော်သည် လောကတွင် စက်ဆုပ်စရာ အကောင်းဆုံး Vampire တစ်ကောင်သာဖြစ်ပေသည်။
ကျွန်တော်တို့ သည် လူသားထဲက လူသားများပင်ဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း သွေးအသစ်မှန်မှန်လဲလှယ်ရန်လိုအပ်နေသော လူနာများလို လူသားများထမင်းဆာရင် စားသလို..သွေးဆာလျှင် သွေးစုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ ထိုမှပင်ရှင်သန်နိုင်သည်။
တိရစ္ဆာန်သွေး၊ လူသွေး စသည့်ဖြင့် ရှင်သန်နေသော သက်ရှိများ၏ သွေးလိုအပ်သည်။
သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင် တစ်ယောက်အတွက် ရှင်သန်ရန်မျှော်လင့်ချက်ဆိုသည်မှာ ညဘက်တွင်ပျော်မြူးသောလူသားများ တစ်ညထက်တစ်ည များသထက်များလာစေရန်သာဖြစ်သည်။ ထိုကိစ္စအတွက်ကတော့ စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ ညစဉ်ကလာပ်များ အရက်ဘားများအနီးတွင် သွားစောင့်နေရုံပင်။ ရုံးပိတ်ရက်များဆိုရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ ညီအစ်ကိုများအတွက်ပူစရာမလိုတော့။
ထိုကဲ့သို့ လူသားတိုင်း၏ သွေးများကို နေ့စဉ်သောက်သုံးနေရသော်လည်း ကျွန်တော်တစ်ရက်မှမပျော်နိုင်ပါ။ ထို့အတူ ကျွန်တော်လုံးဝ မသောက်သုံးရက်သော သွေးအမျိုးအစားလည်းရှိသည်။
ထိုသွေးမှာ ကျွန်တော့်ချစ်သူ၏ သွေးပင်ဖြစ်သည်။ သူမက ကျွန်တော့်ဘဝအမှန်ကို မသိရှာပေ။ ကျွန်တော့်၏ ချွန်ထက်နေသောသွားများကို သွားတက်ကလေးတွေက ချစ်စရာကောင်းလိုက်တာဟုပင် ထင်နေသေးသည်။ တစ်ကယ်တမ်းတော့ သွားတက်ပါသည့်လူတိုင်းနီးပါးဟာ ကျွန်တော်တို့အမျိုးတွေသာဖြစ်သည်။ ထိုချစ်စရာကောင်းသော သွားထက်ထက်များဖြင့် လည်ပင်းနုနုများကို ကိုက်ဖောက်တတ်ကြောင်းကို ရိုးအေးသောသူမ မသိရှာ။ သူမအနားရောက်တိုင်း သွေးနံ့များက တလှိုင်လှိုင်စီးကျတတ်စမြဲ။ ကျွန်တော့်စိတ်တွေ ထိန်းမရဖြစ်ကာ အံကို ခဏခဏ ကြိတ်ထားရတတ်သည်။ သူမကတော့ ကလေးတစ်ယောက်လို ကျွန်တော့်ကို တွေ့လျှင် ပျော်ရွှင်တတ်စမြဲပင်။ သို့သော်လည်း ညနေစောင်းမှ လာလာတွေ့သည်ကို သိပ်မကျေနပ်တတ်။ မနက်ဆိုလျှင် အလုပ်လုပ်နေရသည်ဟု လိမ်ထားရသည်။ ထိုအခါတွင်လည်း ယုံလွယ်သောသူမက ဘာမှဆက်မမေးတော့ပဲ စကားတွေသာဖောင်ဖွဲ့နေတတ်လေသည်။
တစ်ည….ဝတ္တုတွေထဲကလို လမိုက်ညမဟုတ်။ ခွေးတွေကလည်း အူမနေ။ သို့သော် ကျွန်တော်တို့လို သွေးစုပ်ဖုတ်ကောင်တွေအတွက် သားကောင်ပြတ်လတ်နေသော ကာလဖြစ်သည်။ လူအများကြားတွင် ကူးစက်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးပြန့်နေသောကြောင့် ညနေမိုးချုပ်လျှင် မည်သူမျှအိမ်ထဲက အိမ်ပြင်ပင် မထွက်ကြ။ ဒီမြို့လေး၏ လမ်းများပေါ်မှာ တစပြင် လို ခြောက်ကပ်လို့နေ၏။ အစာအိမ်၏တောင်းဆိုမှုကြောင့် နေဝင်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် ကျွန်တော်သားကောင်အရှာထွက်ခဲ့သည်။ တစ်လမ်းဝင် တစ်လမ်းထွက်လျှောက်သွားရင်း တစ်ခါတစ်လေ ကိုယ်လိုသူလို သားကောင်ရှာနေသူများနှင့်သာ တစ်ယောက်စ နှစ်ယောက်စ တွေ့တွေ့နေရသည်။ သို့သော် သူတို့ကိုယ်ပေါ်တွင် ရှင်သန်လတ်ဆတ်ခြင်းဆိုသော လူသား၏သွေးနံ့မရှိတော့။ သားစိမ်းငါးစိမ်းထည့်သည့် ရေခဲသေတ္တာထဲမှ ထွက်လာသော ပုပ်အဲ့အဲ့ အနံ့တစ်မျိုးသာရသည်။ ကျွန်တော့်အနံ့ကိုလည်း ထိုလူတွေရသည်ထင့်…တစ်ချက်ကြည့်၍ လှည့်ထွက်သွားကြသည်။
ကျွန်တော်တို့ကြားထဲတွင် စည်းမျဉ်းတစ်ခုရှိသည်။ လူတစ်ယောက်ကို သားကောင်အဖြစ်တွေ့သည်ဆိုပါစို့…ထိုအချိန်တွင် ကိုယ့်ထက်ဝါရင့်သော အသက်ကြီးသော Vampire တစ်ကောင်က ထိုသားကောင်ကို လိုချင်သည်ဆိုလျှင် ရက်ရက်ရောရော ပေးကမ်းရသည်။ တောတွင်းဥပဒေသလို လမ်းမဥပဒေသ တစ်မျိုးပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသို့မဟုတ်ပါက ထိုဝါရင့်သူ၏ ဆုံးမတိုက်ခိုက်ခြင်းခံရတတ်သည်။ မြွေကြီးက မြွေငယ်ကိုစားပစ်သကဲ့သို့ပင်။ ဆက်လျှောက်လာရင်း သူမတို့ အဆောင် နားသို့ရောက်လာခဲ့လေပြီ။ သူမက နယ်ဝေးမှလာကာ ဒီမြို့လေးတွင်ကျောင်းလာတက်နေသော အဆောင်သူတစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ချက်ချင်းဆိုသလိုပင် ကျွန်တော့်ကိုယ်ခန္ဓာက သူမအိပ်ခန်းအတွင်းသို့ရောက်ရှိသွားလေသည်။ သူမအိပ်နေပုံမှာ အပြစ်ကင်းစင်လှသော ကလေးငယ်တစ်ယောက် အပူအပင်မရှိစွာ အိပ်စက်နေပုံမျိုး…နိုးသွားမည်စိုး၍ ကျွန်တော်ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ကြည့်နေမိသည်။ ဘယ်လောက်ကြာသွားသည်မသိ တိုင်ကပ်နာရီကို ကြည့်တော့မှ မိုးလင်းရန် နာရီအနည်းငယ်သာလိုတော့သည်။ ကျွန်တော့်သွေးတောင်းနေလေပြီ။ အစာရှာထွက်ရပေဦးမည်။ သူမကတော့ အိပ်လို့ကောင်းတုန်း….
ကျွန်တော်လမ်းမဘက်ဆက်ထွက်ခဲ့သည်။ ရုတ်တရက် ရှေ့နားဆီမှ လူနံ့ရလာသည်။ သေသေချာချာ ရှုရှိုက်မိတော့ တကယ့်လူသွေးနံ့ဖြစ်သည်။ ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုနှင့်အတူ ကျွန်တော့်ခြေလှမ်းများ အရှိန်မြှင့်လာသည်။ လမ်းမီးရောင် ဝိုးတဝါးကြားမှ လမ်းမထက်တွင်လူတစ်ယောက် လှဲလျောင်းနေသည်ကိုတွေ့သည်။ ထိုသူသည် ကံဆိုးစွာ ကျွန်တော့် ညစာဖြစ်ရပေဦးမည်။ ကိုယ့်အတွေးနှင့်ကို တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ကာ အနားသို့ရောက်အောင် အမြန်လျှောက်မိသည်။ တွေ့လိုက်ရသောအခါ လူကြီးတစ်ယောက်မဟုတ်ပဲ ကျုံလှီချည့်နှဲ့သော ကလေးငယ်တစ်ယောက် အစာအာဟာရပြတ်ကာ အိမ်သို့ပြန်မရောက်နိုင်ရှာပဲ လမ်းမထက်တွင် ပုံလျက်သားလဲကျနေခြင်းဖြစ်သည်။ သူ့အဝတ်အစားများကလည်း စုတ်ပြတ်သတ်လို့။ အိမ်မှရှိပါလေစ။ ငါသူ့သွေးသောက်လို့ကောင်းပ့ါမလား။ ခါတိုင်းဆိုလျှင် ကလေးငယ်သွေးကို မသောက်သော်လည်း ဒီလိုရှားပါးညအတွက်....အို..ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်…သူဟာ ငါ့ညစာ ဖြစ်ရမှာပေပဲ။ ကျွန်တော့်သွေးထဲမှ ညစ်ထပ်သော စိတ်နှင့် ဖြူစင်သောစိတ်နှစ်ခု အတွင်းတိုက်ပွဲဖြစ်နေကြခြင်းပင်။ နောက်ဆုံးတော့ ဘာဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်စိတ်ကူးပြီး ကလေးငယ်၏လည်မြိုနားသို့ ကျွန်တော့်ပါးစပ်ကပ်လိုက်မိသည်။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:41 PM2comments: Links to this post
အခုလောက်ဆို သုဝဏ္ဏအားကစားကွင်းတွင် လက်ခုပ်လက်ဝါးသံ၊ ဘင်ခရာသံ၊ လက်ခေါက်မှုတ်သံ၊ အားမလို အားမရ ဂိုးနားရောက်မှ ကန်ချက်လွဲသွားသဖြင့် “ဟာ..” ကနဲ အော်သံ စသည့်ဖြင့် သူ့အသင်း၊ ငါ့အသင်း သူ့ထက်ငါအပြိုင်အဆိုင် အားပေးသံများဖြင့် စီညံနေလောက်ပေပြီ။
ကျွန်တော်နိုင်ငံခြားဘောလုံးပွဲများကို အဲဒီလောက်စိတ်မဝင်စားပါ။ သို့သော် မြန်မာနိုင်ငံက ကန်သည့်ပွဲဆိုလျှင်တော့ မလွတ်တမ်းအားပေးဖြစ်သည်သာများသည်။
ငယ်စဉ်ကတည်းက ဘောလုံးကို ရူးခဲ့သော ကျွန်တော်တစ်ယောက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော အမျိုးသားချန်ပီယံလိဂ်ကို ကွင်းထဲတွင်သာ ဆင်း၍ အားပေးလိုက်ချင်ပါသည်။ ကွင်းထဲမရောက်နိုင်ရင်တောင် ရုပ်မြင်သံကြားကြည့်၍ သူကိုယ်တိုင် ဝင်မကန်ရုံတမယ် ကြေငြာနေသောအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်သူနှင့် တစ်ယောက်တည်းရန်ဖြစ်ကာ အားပေးချင်ပါသည်။
အခုလာသော သတင်းအရ.. ပထမပိုင်း ဒုတိယပိုင်း အပြီးတွင် နှစ်ဖက်စလုံးက သရေပွဲဖြစ်နေသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရင်က မြို့တော် ရန်ကုန်နှင့် ရှေးယခင်ကတည်းက ယဉ်ကျေးမှုဖြစ်တည်ရာ ဒုတိယအကြီးဆုံး မန္တလေးမြို့နှစ်မြို့ ၏ အားပြိုင်ပွဲဆိုလျှင်လည်းမမှားနိုင်ပါ။ ရန်ကုန်အသင်းကလည်း ပြိုင်ပွဲကို နိုင်လျှင် သိန်း ၅၀၀ နှင့် တစ်ထောင်အကြားပေးမည်..စသည်ဖြင့် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အားကစားသမားတွေကို အားပေးသလို ရတနာပုံအသင်းကလည်း ရထားတွဲများကို စီစဉ်ကာ မန်းသူ မန်းသားများအား ရန်ကုန်အထိ သွားလာစရိတ်ငြိမ်း အကုန်အကျခံကာ ဘောလုံးပွဲကို အားပေးရန်စီစဉ်သည်။
ပရိတ်သတ်များကလည်း အခုဆိုရင် သုဝဏ္ဏကွင်းထဲတွင် ပြည့်လျှံနေမည်ဆိုတာ ကျွန်တော့် စိတ်မှန်းထဲတွင်ပင် သေသေချာချာ မြင်ယောင်နေမိပါသည်။ အထူးတန်း၊ အရှေ့ဘက်တန်း၊ တောင်ဘက်တန်း၊ မြောက်ဘက်တန်း စသည့်ဖြင့် ကွင်းလျှံနေလောက်ပြီ။ ရတနာပုံပရိသတ်များကလည်း အပြာရောင်ကို ဝတ်ဆင်လို့…ရန်ကုန်ပရိတ်သတ်များကလည်း အစိမ်းနုရောင်ကို ဝတ်ဆင်လို့ အော်ဟစ်အားပေးနေကြမည်မှာ မြေကြီးလက်ခတ်မလွဲဖြစ်သည်။
ယခုနောက်ဆုံး တင်လိုက်သောသတင်းအရ အချိန်ပိုအထိ သရေဖြစ်၍ ပန်နယ်လ်တီကန် ရာ ရတနာပုံအသင်းက ရန်ကုန်အသင်းကို အနိုင်ရရှိသွားပြီဖြစ်သည်။ ပန်နယ်လ်တီအဆုံးအဖြတ်သည် ပြောရခက်သည်။ ဖြစ်ချင်တိုင်းဖြစ်သွားနိုင်ရာ ယခု ရန်ကုန်အသင်းလည်း ချန်ပီယံဆုဖလားနှင့်ဝေးကွာရပြီဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်အသင်း ပရိတ်သတ်များလည်း ကွင်းထဲတွင် ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေကြမည်မှာ အမှန်ပင်ဖြစ်သော်လည်း အနိုင်ရသည့် မန်းသူမန်းသားများကတော့ ပျော်ရွှင်နေကြမည်ပင်ဖြစ်သည်။ ဒါကတော့ နိုင်သူပျော်၊ ရှုံးသူမှိုင်သည့် ဘောလုံးဥပဒေသတစ်ရပ်ပင်။ သို့ပါသော်လည်း အားကစားဆိုသည်မှာ အသင်းစွဲ၊ နိုင်ငံစွဲထက် သူ့ထက်ငါ အနှိုင်မခံ၊ အရှုံးမပေး ယှဉ်ပြိုင်ကြရသည့်ပွဲမို့ ဘောလုံးပွဲများတွင် ကျွန်တော်သည် အသင်းစွဲထက် ဘောလုံးကန်ခြင်းအနုပညာကိုသာ အလေးပေး ကြည့်တတ်သည်။ တစ်ယောက်နှင့်တစ်ယောက် လိမ်ခေါက်ပုံ၊ အပေးအယူ လှပသေသပ်မှု၊ ဘောလုံးအထိန်းအသိမ်း၊ ကန်ချက် အပြင်း အပျော့၊ တစ်ကိုယ်ကောင်းဟုတ်၊ မဟုတ် အသင်းလိုက်ဆောင်ရွက်ချက် စသည်များကိုကြည့်ရသည်မှာ ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသော ပြဇာတ်တစ်ပုဒ်ကို ကြည့်နေရသလိုပင်။ ပြဇာတ်များတွင် စာရေးဆရာ ကောင်းလျှင် ကောင်းသလို ဇာတ်သိမ်းခန်းမည်သို့ ဖြစ်မည်ကို မသိနိုင်သကဲ့သို့ ဘောလုံးပွဲတွင်လည်း ခြေရည်တူသည့် အသင်းနှစ်သင်းတွေ့လျှင် ဘယ်အသင်းနို်င်မည်ဆိုသည်မှာ ဇာတ်ဝင်ခန်း၏ climax တစ်ခုကဲ့သို့ ဆွဲဆောင်အားပြင်းလှပေသည်။
အားကစားများမပေါ်ခင် ရှေးအခါက Gladiator များ အချင်းချင်းသတ်ဖြတ်ခြင်းများကို ကြည့်ကာ လူတို့ ပျော်ရွှင်မှုကို ရှာကြသည်။ ကျွန်များကို သင်တန်းပေး၊ ထို့နောက် ကျွန်အခြင်းခြင်းလှောင်အိမ်ထဲတွင် ကြက်ခွပ်သလို တိုက်ခိုင်းကာ ကြည့်ရှုသူများ ရင်သပ်ရှု့မောပျော်ရွှင်မှုကို ရှာကြသည်။ ထို့နောက်ပိုင်း တွေးခေါ်ပုံအဆင့်အတန်းမြင့်၍ အားကစားနည်းများ ပေါ်ပေါက်လာသောအခါ တစ်နိုင်ငံနှင့် တစ်နိုင်ငံ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး အားကစားနည်းမျိုးစုံ တွင် ပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ကာ အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲလို ပွဲကြီးများ ကျင်းပ၍ လူသားများကျန်းမာစေရန်နှင့် နိုင်ငံအချင်းချင်း ဂုဏ်သိက္ခာပြိုင်ဆိုင်မှု စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ရှာကြသည်။ ထူးချွန်သူအားကစားသမားများမှာလည်း သူဠေးသူကြွယ်၊ ရုပ်ရှင်မင်းသားမင်းသမီးများ တန်းတူ လူအများ၏ အလေးပေးမှုကို ခံလာရသည်။
အားကစားနည်းမျိုးစုံထဲမှ ဘောလုံးအားကစားမှာကား လူအများကြားရေပန်းအစားဆုံးလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်သည်။ သားရေဘောလုံးမပြောနှင့် ကျွန်တော်တို့ငယ်ငယ်က ပလတ်စတစ်ဘောလုံးတစ်လုံးလောက်နှင့်ပင် ကန်စရာ လမ်းမတစ်ခုရှိလျှင် အလုပ်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ဖြင့် လူထုကြားဘောလုံးရောဂါပိုးကူးစက်သလို လျင်လျင်မြန်မြန်ပျံ့နှံ့သည်။ မြန်မာပြည်ရှိ ရပ်ကွက်ကြို ရပ်ကွက်ကြား လမ်းကြို လမ်းကြားများတွင်လည်း ဘောလုံးပွဲများရှိနေသကဲ့သို့၊ တောင်အာဖရိကကဲ့သို့သော နိုင်ငံများရှိ လမ်းကြိုလမ်းမများတွင် နှပ်ချေးတွဲလောင်းများ ကန်နေကြပေဦးမည်။ ထို့အတူ အင်္ဂလန်ရှိမြို့ကြီးပြကြီးများတွင် ငွေကြေးအမြောက်အများ အကုန်အကျခံကာ အသည်းအသန်ကန်နေသကဲ့သို့၊ ကမ္ဘာ့ဖလားကဲ့သို့သော နိုင်ငံတကာ ဘောလုံးပြိုင်ပွဲများမှာလည်း နောက်မျိုးဆက် များစွာတိုင်အောင် ရေပန်းစားနေမည်မှာ မလွဲဧကန်ပင်ဖြစ်သည်။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:35 PM2comments: Links to this post
Labels: football, Myanmar
ကျွန်တော်ရေးမည်။ စာရေးမည်။ အသွေးအသားပေါက်ကွဲမှုတစ်မျိုးအဖြစ် အတွေးစနက်တံကိုမီးရှို့ကာ ကျွန်တော့်လက်များဖြင့် လင်းချင်းစေရမည်။ ကျွန်တော်သည် စာရေးဆရာတစ်ယောက်သာဖြစ်ချင်ပါသည်။ စကားကြီးစကားကျယ်ပြောရလျှင် သူ့ပတ်ဝန်းကျင်လောက အတွက် နေမင်း အလင်းမဟုတ်တောင် ပိုးစုန်းကြူးအလင်းခန့် ထွန်းလင်းချင်ပါသည်။ ထို့အတွက် ကုန်သည်မဟုတ်၊ စီးပွားရေးသမားမဟုတ်၊ အရင်းရှင်မဟုတ်၊ ခေါင်းပုံဖြတ်သူမဟုတ်၊ နိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်၊ ကျောင်းဆရာမဟုတ်၊ သင်္ဘောသားမဟုတ်၊ သူဠေးမျက်နှာထိုင်ကြည့်နေရသော လခစားမဟုတ်၊ မင်းသား မဟုတ်၊ အင်ဂျင်နီယာမဟုတ်၊ ဆရာဝန်မဟုတ်၊ အဆိုတော် အစရှိသဖြင့် တစ်ခြားနည်းဖြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းမဟုတ်….မဟုတ်…မဟုတ်
သို့အတွက် ကျွန်တော်သည် စာရေးဆရာတစ်ယောက်သာဖြစ်ချင်ပါသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့် ငယ်ရွယ်စဉ်က ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ဆိုသည့် စာစီစာကုံးကို သတိရမိပါသည်။ ထိုစဉ်က သမာရိုးကျအတိုင်း “ရည်မှန်းချက်မရှိသူလူတစ်ယောက်၏ ဘဝသည် တက်မရှိသော ရွက်လှေတစ်စီး အပြောကျယ်သောပင်လယ်ပြင်တွင် လွင့်မျောနေသကဲ့သို့ ကိုယ်လိုရာကမ်းသို့မကပ်နိုင်ချေ။ ထို့အတွက်ကြောင့် ကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်သည် ……..ဖြစ်သည်ဟု” အခြားလူများနည်းတူ စာစီစာကုံးစာအုပ်မှကူးချကာ ရေးခဲ့ဘူးပါသည်။ ဖြန့်ထွက်တွေး၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ငါဘာကောင်ဖြစ်ရမည်ဟု အတွင်းမြင်ချင်း သိပ်မရခဲ့ပါ။ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင် မရိုးသား မပွင့်လင်းခဲ့ပါ။ ရခဲ့သော်လည်း ထိုကဲ့သို့ ရွေးချယ်မှုအတွက် အကျိုးအဆက်အားလုံးအတွက် ဘာမဆိုရင်ဆိုင်ရဲသည့် သတ္တိရှိရပါမည်။ စာရေးဆရာအဖြစ် နာမည်မကြီးခင် ငတ်သည့်၊ ပြတ်သည့်ဒုက္ခ၊ လူတကာက မေးငေါ့သည့်ဒုက္ခ ထိုကဲ့သို့သော အသေးအဖွဲဒဏ်များသာမက အနီးစပ်ဆုံးအဖြစ် မိသားစု၏ ဖိအားကိုပါခံနိုင်ရည်ရှိရပါမည်။
ရွေးချယ်ခွင့်သိပ်မရှိသော ကျွန်တော်တို့ ပညာရေးခေတ်တွင် ကြီးပြင်းလာရသော ကျောင်းသားပီပီ ယောယိမ်းလိုက်၊ ဘသားယိမ်းလိုက်သော ရည်မှန်းချက်များသာများနေခဲ့ပါသည်။ ဘယ်ကလေးကမှတော့ “ငါကြီးလာရင် စာရေးဆရာကြီးဖြစ်ရမည်” ဟု သူ့စာစီစာကုံးတွင်ထည့်ရေးလေ့ရှိမည်မဟုတ်။ ထိုသို့ရေးသည်နှင့် အမှတ် ၁၀၀ မရသည့်အပြင် ဆရာမ၏ ကြိမ်တုတ်သာ လက်ဆောင်မွန်အဖြစ်ရရှိပေလိမ့်မည်။ ထို့အတူ ကတ်ထူစာရွက်တစ်ခုဖြစ်သော ဘွဲ့လက်မှတ်တစ်ခုနှင့် အတူ လူ့စီးမျောမှုတစ်ခုအတွင်း ဝင်၍ အိမ်ထောင်သားမွေးလုပ်ကာ မီးဇာကုန် ဆီခန်းဖြစ်မလား၊ မီးဇာမကုန် ဆီမခန်းခင် နောက်ထပ် မီးတောက် မီးပွင့်များ ကူးပေးနိုင်ခဲ့သလား၊ ဖန်တီးချင်သေးလား စသည်ဖြင့် စဉ်းစားမိပါသည်။
Oxford တက္ကသိုလ်မှ အင်္ဂလိပ်စာပါမောက္ခ G. Gordon ရဲ့အဆိုအရ စာပေအနုပညာဟာ လုပ်ငန်းတာဝန်သုံးခုကို ယူရလိမ့်မယ်တဲ့။ တစ်ခုက နှစ်သက်ကြည်နူးမှုရသကိုပေးမှု၊ တစ်ခုက အမှားအမှန်ညွှန်ကြားဖို့၊ နောက်တစ်ခုက လူတွေရဲ့ ဝိဥာဉ်ကို ကယ်တင်ဖို့နဲ့ နိုင်ငံတော်ကို ကုစားဖို့တဲ့။ (ဇော်ဇော်အောင်- ဝေဝေရီရီဝတ္တု စာမျက်နှာ ၁၁၀တွင်ရှု့) ဒီစကားလုံးတွေက ကျွန်တော့် လမိုက်ညကောင်းကင်တွင် မီးပုံးပျံထွန်းညှိလိုက်သလို လင်းချင်းသွားစေသည်။ ကျွန်တော်တို့ အဘယ်တာဝန်ကို ယူနိုင်ပါသနည်း?
ထိုစာအုပ်ထဲတွင်ပင် စာရေးဆရာဇော်ဇော်အောင်က နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ချမ်းသာကြွယ်ဝရန် အချက်အလက် မျာမှာ စီးပွားရေးပေါ်လစီမှန်ရမည်။ ကမ္ဘာနှင့်လိုက်လျောညီထွေရှိရမည်။ အလုပ်ကြိုးစားမည်ဆိုလျှင် သယံဇာတမထွက်သော စင်္ကာပူနိုင်ငံပင် ချမ်းသာလာနိုင်သည်။ ဂျပန်လိုကျွန်းငယ်ပင် ပြာပုံထဲမှ နိုးထလာနိုင်သည်။ ရုပ်ပစ္စည်း ချမ်းသာဖို့၊ ကြွယ်ဝဖို့၊ ပြည့်စုံဖို့ဆိုတာ သိပ်မခက်ပါ။ စိတ်ဓာတ်ရေးရာမှာ အားနည်းခြင်း၊အောက်တန်းကျခြင်း၊ချွတ်ချုံကြခြင်းများကို ဖြည့်ဆည်းနိုင်ရန်ခက်သည်။ သိပ္ပံနည်းပညာများဖြင့် မကယ်နိုင် စိတ်ဓာတ်တွင်စွဲကပ်နေသော နာတာရှည် ရောဂါကို ကယ်တင်ရန် စာပေအနုပညာ သာရှိသည်။ နိုင်ငံရေးသမားတွေမကယ်နိုင်၊ သိပ္ပံပညာ၇ှင်တွေ၊ စီးပွားရေးပညာရှင်တွေ၊ ဒဿနပညာရှင်တွေမကယ်နိုင်၊ စာရေးဆရာတွေ၊ ကဗျာဆရာ၊ ဝတ္တုရေးဆရာတွေ၊ စာပေအနုပညာသမားများသာလျှင် ကယ်တင်နိုင်ပေလိမ့်မည်။ အင်္ဂလိပ်ပါမောက္ခပြောစကားအရ
England is sick and English Literature must save it… To save our souls and heal the state ဟုဆိုလျှင် မြန်မာပြည်ကို အင်္ဂလန်ဆိုသည့် စကားလုံးအစား အစားထိုးကြည့်ချင်သည်။
ကျွန်တော်အပါအဝင် လူအများစု တစ်ခြားနိုင်ငံသို့ထွက်ကာ ပညာရှာကြသည်။ အလုပ်လုပ်ကြသည်။ ထိုအထဲတွင်မှ မိမိဇာတိချက်ကြွေမွေးရပ်မြေ နိုင်ငံကိုအချိန်တန်ရင် ပြန်ကာ ခေါင်းချမည်ဟုကြံသူသာများမည်ဟု ကျွန်တော်ထင်ပါသည်။ (တစ်ချို့လူများအတွက် လွဲကောင်းလွဲနိုင်ပါသည်) သို့သော် ထိုထွက်ခွာသွားသော လူများစုမှ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်း ပြန်ရောက်၍ ခေါင်းချကာ ဘယ်နှစ်ရာခိုင်နှုန်းက တစ်ခြားနိုင်ငံသား ခံယူသွားကြသနည်း? ကျွန်တော့် အမြင်အရ ဒုတိယလူစားမျိုးက များပေမည်။ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မိမိကိုယ်ကို တစ်ခြားနိုင်ငံသားခံယူပေမည်။ ထို့အတွက် ကျွန်တော်အပြစ်မဆိုပါ။ လူသားတိုင်း ခံယူချက် သဘောထားခြင်းမတူစွာ လွတ်လပ်စွာကွဲပြားခွင့်ရှိကြသည်။ သို့သော် ဆရာဇော်ဂျီ၏ ကဗျာကို သတိရမိပါသည်။
ကျွန်တော်စဉ်းစားမိသည်မှာသေသောအခါ သူတစ်ပါးတိုင်းပြည်တွင် သရဏဂုံတင်စရာမရှိသောအဖြစ်ဖြင့် မြေသြဇာဖြစ်ချင်သလား? ဘဝ၏နှောင်းပိုင်းအရွယ်တွင် ဘုရားရိပ် တရားရိပ်ဖြင့် အေးအေးသာသာ ဆီခန်းချင်သလား? ကျွန်တော်မွေးသောမြေသည် ထိုအချိန်အထိ ဖုန်းဆိုးမြေဖြစ်နေပစေ ထိုအရပ်တွင်သာ စိတ်ချလက်ချခေါင်းချလိုပါသည်။ ထိုသို့ခေါင်းမချခင် ထိုမြေအတွက် ဖယောင်းတိုင် တစ်တိုင်လောက်တော့ ထွန်းပေးချင်ပါသည်။ ကျွန်တော်တို့အားလုံး၏ ဖယောင်းတိုင်မီးတောက်များ တစ်ယောက်တစ်လက် ဝိုင်းဝန်းပူးပေါင်းလိုက်မည်ဆိုပါလျှင်….
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:31 PM2comments: Links to this post
စာရေးဆရာ အောင်ခင်မြင့်ရေးသားသည့် "တိမ်လွှာမို့မို့လွင်မှသည် ပို့စ်မော်ဒန်အနုပညာဆီသို့"စာအုပ်ထဲတွင်
Sixth Symphony (ဆဋ္ဌမဆင်ဖိုနီ) တေးသွားကတော့ ချီကော့ဗ်စကီးရဲ့ အကောင်းဆုံးလက်ရာ Masterpiece လို့ခေါ်တဲ့တေးသွားပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ချီကော့ဗ်စကီးဟာ အဲဒီအထဲမှာ သူ့ဝိဥာဉ်တစ်ခုလုံးကိုပါထည့်သွင်း ဖွဲ့ဆိုခဲ့လို့ပဲ။ ဒါပေမယ့် ဆဋ္ဌမဆင်ဖိုနီရဲ့ ပထမဆုံးတင်ဆက်မှုဟာ ကျရှုံးမှုတစ်ရပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ စိန့်ပီတာစဘတ်ဟာ ၁၉ရာစုရဲ့အကောင်းဆုံးလက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ ဆဋ္ဌမဆင်ဖိုနီကို ကျိုးတို့ကျဲတဲသြဘာသံတွေနဲ့ ခြောက်တိခြောက်ကပ် တုံ့ပြန်ခဲ့တယ်။ အဲဒီအချိန်က စိန့်ပီတာစဘတ်ဟာ ဆဋ္ဌမဆင်ဖိုနီကို နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ချီကော့ဗ်စကီးဟာ စိတ်ပျက်ပြီးကိုယ့်ကိုကိုယ် သတ်သေခဲ့တယ်။ (သူဟာ ကာလဝမ်းရောဂါဖြစ်ပွားနေချိန်မှာ ကျိုချက်မထားတဲ့ရေကို တမင်သက်သက်သောက်ခဲ့တယ်။)
အထက်ပါအဆိုရဆိုလျှင် ဒီ ဆဋ္ဌမဆင်ဖိုနီထဲတွင် ချီကော့ဗ်စကီးရဲ့ဝိဥာဉ် ကိန်းအောင်းကောင်းကိန်းအောင်းနေနိုင်ပါသည်။ ရှာဖွေကြပါကုန်...
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:31 PM3comments: Links to this post
ချီကော့ဗ်စကီး အကြောင်း - http://en.wikipedia.org/wiki/Pyotr_Ilyich_Tchaikovsky
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:26 PM No comments: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 11:14 AM 1 comment: Links to this post
Labels: မြန်မာ, သီချင်း
တော်ပြီပေါ့..ဒီလောက်ဆိုတော်ပြီပေါ့ - ရသ
TAW P POT - YATHA , BIGG Y
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 1:51 AM No comments: Links to this post
စကားမပြောတာကြာ…ငါ့ကိုယ်ငါ ထိန်းချုပ်ပြီး အဆက်အသွယ်မလုပ်တာတောင်မှ…
မင်းနာမည်ကို အိပ်မက်ထဲမှာ ယောင်ယောင်ခေါ်နေတုန်းပဲ…
ငါမူးတိုင်း မင်းနာမည်က ငါ့ပါးစပ်ဖျားကထွက်လာဆဲပဲ…
ငါက စိတ်ကူးယဉ်တတ်တဲ့လူတစ်ယောက်မဟုတ်ဘူး… ဒါတောင်မှ မင်းရဲ့ ညှို့ချက်ကပြင်းထန်လွန်းလှတယ်…
ငါ့ဓာတ်ပုံကို မင်းမြင်ဘူးပေမယ့်…မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံကို ဝိုးတဝါးပဲငါမြင်ဘူးတယ်…
ငါ့အသက်ကို မင်းသိပေမယ့်..မင်းအသက်ကို ငါမသိဘူး…
ငါနေမကောင်းတိုင်း မင်းစိုးရိမ်သလို…မင်းနေမကောင်းတိုင်း ငါပါကိုယ်ပူချင်လာတယ်…
မင်းခုချိန်ဘယ်သူနဲ့ ဘာလုပ်နေမလဲ…ဘယ်နေရာရောက်နေမလဲ တွေးနေမိလို့…ကျောက်ရုပ်လို ငါဖြစ်ဖြစ်သွားတတ်တယ်…
ငါနေတဲ့မြို့ကိုရောက်လာတာတောင် ငါ့ကို ဖုန်းဆက်ဖော်မရဘူး…
စီးချင်ရင်စီး..မစီးချင်ရင် ဂိုဒေါင်ထဲထည့်ထားတဲ့ ကားတစ်စင်းမဟုတ်ဘူး..
အတိတ်တွေက မှုန်ဝါးပေမယ့်..ငါတို့နှစ်ဦးဇာတ်လမ်းမှာ တစ်ချို့နေရာကအကောင်းအတိုင်းရှိနေဆဲပါပဲ… ဟိုတစ်ကွက် ဒီတစ်ကွက်ပိတ်သားထက် အရင်လို ကြည့်မကောင်းပေမယ့် မြင်ရတယ်…
အဓိပ္ပယ်မရှိတာသိပေမယ့် တစ်ခါတစ်လေ တိုက်ဆိုင်မှုတွေရှိလာတော့လည်း အမှတ်တမဲ့မင်းကိုလွမ်းပါတယ်…အပေါ်ယံရှပ်ထိသော ဒဏ်ရာမဟုတ်တော့ လွယ်ကူစွာနဲ့ငါမေ့မရဘူးကွယ်…
မင်းကို ဘယ်တော့မှ ဘလောခ့်မလုပ်ပေမယ့်
မင်းရဲ့ ဂျီတော့ခ်ကိုတော့ ငါပြန်ဖြေမှာမဟုတ်တော့ဘူး…
မင်းရဲ့လက်မှာ တစ်ခါပြန်လည်ကာ အသက်ဝင်တောက်ပ…
ပျော်ရွှင်ခြင်းကို ငါ့ရင်ဘတ်မှာ တံဆိပ်လိုကပ်ရင်း…
ငါ့ကောင်းကင်ပေါ်မှာ တစ်သက်တာ ထွန်းလင်းခွင့်ပေးထားမှာပါ…
ပြန်တွေးတိုင်းငါ့မှာ…အို သွေးပျက်မတတ် တုန်နေရင်းငါ..
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 10:21 AM 1 comment: Links to this post
လေအေးစက်တပ်ထားတဲ့အခန်းထဲမှာ လူတစ်ယောက်ကို နွားတစ်ကောင်လိုခိုင်းတာခံရင်း..
မှားနေတာကိုထောက်ပြရင် အရှိကိုအရှိအတိုင်းပြန်ပြောရင် ခွေးတစ်ကောင်လိုအူတယ် အထင်ခံရတယ်..
အသိပညာရဖို့အချိန်နဲ့ ပျော်ရွှင်မှုအချိန် မိသားစုနဲ့နေဖို့အချိန်က တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကြမ်းပိုးတစ်ကောင်လို သေးငယ်လာတယ်..
ညစာကို နောက်ကျမှ ၀က်တစ်ကောင်လိုစားရင်း နဂါးတစ်ကောင်လိုငိုက်မြည်းတတ်လာတယ်..
အဲဒီလိုနဲ့ ကျန်းမာရေးက တစ်နေ့တစ်ခြား ကျားနာတစ်ကောင်လိုချူချာလာတယ်..
မြေရှင်ပဒေသရာဇ်စနစ်ကို LV လက်ကိုင်အိတ်တပ်ပေးရင်း
အပုပ်နံကို Victoria Secretနဲ့ မလုံ့တလုံ့ ဆင်သေကို ဆိတ်ရေနဲ့ဖုံးရင်း
ခြေသည်းမည်းမည်းတွေကို Gucci ဒေါက်ဖိနပ်ဝတ်ပေးနေကြတယ်
အသားမည်းမည်း ဗိုက်ရွှဲထိပ်ပြောင် ချစ်တီးကို Fair & Lovely ပေးနေသလိုပါပဲ…
ဂျီကြိုးနဲ့ အတွင်းခံအရောင်တင် လေလံပွဲတွေခေတ်ထ
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:26 AM 1 comment: Links to this post
တစ်ချို့က လေခလို့ ကြွေကျချိန်ကိုစောင့်တယ်
ဘဝဆက်တိုင်း မင်း ကံ့ကော်ဖြစ်ပါစေသားလို့
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:38 AM 1 comment: Links to this post
အဲဒီလိုနဲ့ပဲ..လူတစ်ယောက်ဟာ ပင်လယ်ရဲ့ကြမ်းပြင်အောင်ကို ရောက်ရှိသွားခဲ့တယ်။
သူနဲ့အတူ ပူလောင်ခြင်းတွေလည်းပါရဲ့၊ သစ္စာဖောက်ခံရမှုအတွက် တနုံနုံဆွေးမြေ့မှုတွေလည်းပါရဲ့၊
တစ်ဘဝလုံးအတွက်ပုံအောထားသမျှတွေ..အားလုံး..အားလုံးပါပဲ၊ အနှစ်နှစ်အလလ နဖူးကချွေး
သင်္ဘောကြမ်းပြင်တွေ၊ ဖုန်မှုန့်တွေ၊ သံမှုန့်၊ သဲမှုန့်တွေအပေါ်ကျထားခဲ့ရသမျှ..
ဒီလမ်းကိုလိုက်တဲ့အတွက် ကျန်ရစ်သူတစ်ချို့က ပျော့ညံလှချည်လားလို့ စုတ်သတ်ကြလိမ့်မယ်၊
တစ်ချို့ကလည်း အဖန်ငါးရာ ငါးကမ္ဘာမှာ ကျင်လည် ရတော့မှာပဲဆိုပြီး ကရုဏာ သနားကြမယ်၊
အဲဒီလိုမေးလိုက်တိုင်း ကိုတိုးတစ်ယောက်အမြဲတမ်းပြုံ: ပြတတ်တယ်.. အေးပေါ့ဗျာ..လာမယ်ကြာမယ်ပေါ့..
သူ့ဘဝက သင်္ဘောကျင်း၊ ဒီသင်္ဘောကျင်းကြီးကသူ့ဘဝ။ မနက်ဆို အလုပ်လုပ်ဖို့ ဥသြဆွဲသံနဲ့အတူ အလုပ်တက်၊ သံမှုန်၊ဖုန်မှုန့်တွေကြားမှာ… မှောင်မှောင်မိုက်မိုက် အောက်ဆီဂျင်လုံလုံလောက်လောက် မရှိတဲ့ သင်္ဘောတစ်စီးရဲ့ ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ… ချောင်ကြိုချောင်ကြားထဲမှာ…စက်သံ..အော်သံ..လွှတိုက်သံ..ဂဟေဆော်သံတွေကြားမှာ.. အသက်နဲ့ နပန်းလုံး၊ နေ့လည် မှာ၂ ကျပ်ဖိုးဖြစ်သလိုစား၊ စီးကရက်တစ်လိပ်သောက်၊ တစ်ရေးမှိတ်၊ အလုပ်ပြန်လုပ်၊ ညနေဥသြဆွဲတဲ့ အသံနဲ့အတူ ခြေလက်မသယ်ချင်သယ်ချင် အလုပ်ပြန်၊ ၈ယောက်အတူတူနေတဲ့တစ်ခန်းထဲဝင် ဖြစ်သလိုစား ပုတီးစိပ်၊ အိပ်…အဲဒါက ကိုတိုးရဲ့သမ္မစဉ်..
တစ်ခြားလူတွေလို အရက်မသောက်၊ ပိုကာမဆွဲ၊ အချိန်ပို ရရင် တရားထိုင်ရင်ထိုင် မထိုင်ရင်စာအုပ်တစ်အုပ်နဲ့ အေးအေးလူလူနေတတ်တဲ့လူ။
တစ်ရက်ကြတော့ ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံကိုင်ရင်း ငိုင်နေလေရဲ့။ အခန်းဖော်တွေကတော့ ဒီလူကြီးမရိုးသားဘူးပေါ့။
အေးကွာ..အမေနဲ့ရွာကိုလွမ်းလို့..နောက်ပြီး ငါမပြန်ဖြစ်တာလည်း ၄နှစ်လောက်ရှိပြီကွ..
ကျွန်တော်အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့.. အရင်ကလို တစ်ခါမှမပြုံးဘူးတဲ့အပြုံးနဲပြုံးရင်း…
နှစ်ဟောင်းကုန်လို့ နှစ်သစ်ရောက်ပြီ..ပိတောက်ပင်တွေလည်း အင်္ကျီလဲဝတ်ပြီးပြီ..ကိုတိုးတစ်ယောက်ပြန်မလာသေး။
ပြန်လာတဲ့လူတွေပြောတာတော့ သူ့ရွာမှာထမင်းရည်ချောင်းစီးအလှူပေးပြီး ကိုတိုးတစ်ယောက်မိန်းမယူပြီ။ ဂေါ်မစွံလူပျိုကြီးမဟုတ်တော့။ အိမ်ထောင်ဦးစီးကိုတိုးကြီးဖြစ်ပြီ။
နောက်တစ်လလောက်ကြာမှ ကိုတိုးရောက်လာသည်။ အရင်ကကိုတိုးမဟုတ်တော့။ ကြည့်လိုက်တိုင်းပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင် ရီရီမောမော..အလုပ်ထဲမှာဆိုရင်လည်း တက်တက်ကြွကြွ ရွှင်ရွှင်လန်းလန်း အလုပ်ကိုလည်း နှစ်ဆတိုးလုပ်လာလို့ အလုပ်သမားခေါင်းကတောင် လျှော့လုပ်ဖို့တားရသည်။
သြော်…အချစ်ကလည်း ကိုတိုးတစ်ယောက်ကို အင်္ကျီလဲဝတ်ပေးလိုက်လေပြီ၊
ကိုတိုးတစ်ယောက် အရင်ကလို တရားလည်းမထိုင်တော့။ ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူ တစ်ခွက်တစ်ဖလားချရင်း စကားကိုလည်း အာဝဇ္ဖန်းရွှင်ရွှင်ဖြင့်ပြောတတ်လာသည်။ နဂိုထဲက စာဖတ်များသူဖြစ်သောကြောင့် သူ့စကားများကလည်း ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက် အသစ်တွေချည်း။ မေးကြည့်တော့ သူနဲ့သူ့ရဲ့မမအကြောင်းကိုလည်းပြောပြသည်။
ငါတို့နှစ်ယောက်က အွန်လိုင်းမှာတွေ့တာကွ။ ငါထက်တော့အသက်ကလေးမဆိုသလောက်ကြီးတယ်။ ဒါပေမယ့်ကွာ မင်းသိတဲ့အတိုင်း အချစ်မှာ မျက်စိမှမရှိတာ။ အသက်ဆိုတာကတော့ ဝေလာဝေး…
ညအိပ်ခါနီးလာရင် ကိုတိုးတစ်ယောက် ဖုန်းတစ်လုံးနဲ့အလုပ်ရှုပ်နေပြီ။
မရယ်..မောင်လည်းလာချင်တာပေါ့..ရှေ့ရေးအတွက် … မရယ်..
စသည်ဖြင့် ဖုန်းကြီးကိုကိုင်ရင်း မျက်ရည်ဖြိုင်ဖြိုင်ကျသည့်အခါကျသည်။ သဘောကျရင်း အော်ကြီးဟစ်ကျယ်လည်း အော်ရီချင်ရီနေတတ်သည်။
ရူးသွားပြီ။ လေလှိုင်းတွေကြားထဲမှာ ကိုတိုးတစ်ယောက် အကြီးအကျယ် အချစ်ရူးရူးသွားလေပြီ။
တစ်ညတော့ ကိုတိုးကြီးတစ်ယောက် ဖုန်းကို ငိုင်ပြီး အခန်းထောင့်မှာ ငူငူကြီးထိုင်နေသည်။
စကားလည်းမပြော။ ကျွန်တော်တို့မေးတော့လည်း မထူး။ အဲဒီနေ့မှစ၍ ဘယ်သူနဲ့မှလည်း စကားမပြောတော့။
အလုပ်ထဲတွင်လည်း အရင်လိုမဟုတ်တော့။ အားလုံးကိုလည်း ရှောင်နေတတ်လေသည။် သူ့ဝသီဆိုပေမယ့် ကြာလာသည့်အခါ မသင်္ကာတော့။ ကိုတိုးကြီးဘာဖြစ်ပြန်သနည်း။
တစ်ခြားလူတွေပြောတာတော့ သူ့ဇနီးအသစ်စက်စက်လေးက ဖောက်ပြန်သွားသည်။ အနှစ်နှစ်အလလ ကိုတိုးစုထားသည့် ပိုက်ဆံများလည်း နောက်ထပ်တစ်ယောက်နှင့် ကုန်အောင်သုံးဖြုန်းပစ်သည်။
ကိုတိုး၏ လက်ရှိအဖြစ်ကိုကြည့် ရင်းဖြစ်နိုင်ချေရှိနေသည်။ သို့သော်လည်း သူပို၍ စိတ်မကောင်းမဖြစ်အောင် တမင်တကာ မမေးမိ။ သူကလည်း လူတွေနဲ့ ကြာလာလေ ဝေးဝေးနေနေသည်။
အလုပ်ထဲတွင် ကိုတိုးပျောက်သွားသည်။ လူတွေခွဲ၍ လိုက်ရှာသည်။ သင်္ဘောကျင်း၏ ချောင်ကြိုချောင်ကြားမှန်သမျှ သူသွားတတ်သောနေရာမှန်သမျှ။ မတွေ့။
နေ့လည် ထမင်းစားချိန်ကတောင် နောက်ဆုံး တွေ့လိုက်သေးတယ်။
တွေ့ပါပြီ။ ကိုတိုးရဲ့ အလုပ်သမားဦးထုပ်၊ မျက်မှန်၊ ဖိနပ်၊ အလုပ်သုံး ပစ္စည်းအားလုံးကို ဆောက်လက်စ သင်္ဘောတစ်ခုရဲ့ အနောက်ပိုင်းမှာ စနစ်တကျ ပုံထားသည်။ ဘေးတွင်တော့ ဖုန်တွေကြားထဲမှာ ထင်းနေသည့် ခြေရာများ၊ ခြေရာတွေဦးတည်နေသည်က ပင်လယ်။
သေချာသွားပါပြီ။ ကိုတိုးတစ်ယောက်ခံစားမှု့အဆုံးအစွန်သို့ရောက်ရှိသွားပြီ။ အဆုံးသတ်မလှသောဘဝတစ်ခု နိဂုံးချုပ်ခဲ့လေပြီ။
အနောက်ဘက်တွင်လည်း ပင်လယ်အောက်သို့ နေလုံးဝင်ရောက်ပျောက်ကွယ်သွားတော့သည်။
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 11:02 PM 1 comment: Links to this post
Posted by ဒီဝိုင်း (D'vine) at 7:54 PM No comments: Links to this post